Tag: google nchịkọta | Martech Zone
Kpido: nyocha Google
VideoAsk: wulite itinye aka, mmekọrịta, nkeonwe, ihe egwu vidiyo anaghị emekọ ọnụ
N'izu gara aga, m na-ejuputa nyocha nke influencer maka ngwaahịa nke m chere na ọ bara uru ịkwalite na nyocha nke a rịọrọ bụ site na vidiyo. Ọ na-adọrọ mmasị nke ukwuu… N'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo m, onye nnọchi anya ụlọ ọrụ jụrụ m ajụjụ… n'akụkụ aka nri, pịara m wee zaa azịza m. Nzaghachi m nwere oge ma enwere m ike idekọ nzaghachi ma ọ bụrụ na ahụghị m nke ọma
Jiri jQuery gee ntị wee nyefee ihe omume Google Analytics maka Pịa ọ bụla
Wenezdee, Machị 9, 2022 Wenezdee, Machị 9, 2022 Douglas Karr
Ọ tụrụ m n'anya na njikọta na sistemụ anaghị etinye Google Analytics Event Tracking na nyiwe ha. Ọtụtụ n'ime oge m na-arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa na-emepụta nsochi maka Ihe omume iji nye onye ahịa ozi ha chọrọ gbasara àgwà ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ na saịtị ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, edere m maka otu esi eso mailto clicks, tel clicks, na ntinye akwụkwọ Elementor. M ga-aga n'ihu na-ekerịta azịza ya
Kedu ka UTM Parameters na Email si arụ ọrụ na mkpọsa Google Analytics?
Anyị na-eme ntakịrị mkpagharị na mmejuputa ọrụ nke ndị na-enye ọrụ email maka ndị ahịa anyị. Ọ bụ ezie na a naghị akọwakarị ya na nkwupụta ọrụ, otu atụmatụ anyị na-ebuga mgbe niile bụ ịhụ na a na-akpado ozi email ọ bụla na ngwa UTM ozugbo ka ụlọ ọrụ wee hụ mmetụta nke ahịa email na nzikọrịta ozi na okporo ụzọ saịtị ha. Ọ bụ nkọwa dị mkpa nke a na-elegharakarị anya… mana ekwesịghị ịbụ. Gịnị bụ
Sochie Pịa Mailto na Ihe Omume Google Analytics Iji Google Tag Manager
Thursday, January 27, 2022 Fraịde, Jenụwarị 28, 2022 Douglas Karr
Ka anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ na mkpesa, ọ dị mkpa ka anyị guzobe akaụntụ Google Tag Manager maka ha. Onye njikwa mkpado Google abụghị naanị ikpo okwu iji wụnye script weebụsaịtị gị niile, ọ bụkwa ngwa siri ike iji hazie ebe na mgbe ịchọrọ ịkpalite omume n'ime saịtị gị site na iji script ọ bụla etinyere. Inye ozi email a na-enyocha na mpụga saịtị gị bụ ụzọ dị mma iji mee ka ọ dịrị ya mfe
Sochie Pịa ka ịkpọ oku na mmemme Google Analytics Iji Google Tag Manager
Wenezdee, Jenụwarị 26, 2022 Thursday, January 27, 2022 Douglas Karr
Ka anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ na mkpesa, ọ dị mkpa ka anyị guzobe akaụntụ Google Tag Manager maka ha. Onye njikwa mkpado Google abụghị naanị ikpo okwu iji wụnye script weebụsaịtị gị niile, ọ bụkwa ngwa siri ike iji hazie ebe na mgbe ịchọrọ ịkpalite omume n'ime saịtị gị site na iji script ọ bụla etinyere. Ọ dị ka ihe karịrị ọkara nke ndị ọbịa saịtị gị niile na-abịa na saịtị gị site na a